Esi gbanwee ndabara nchọgharị na android | Gam akporosis
Ignacio Lopez | 31/03/2021 08:00 | Emelitere ka 31/03/2021 13:03 | Nkuzi
N’agbanyeghi Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị eji eme ihe na sistemụ arụmọrụ ọ bụla, Nke a apụtaghị na ọ bụ ihe nchọgharị kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa. Firefox, Opera, ihe nchọgharị Samsung ... ha bụ ezigbo ihe nchọgharị na-enye anyị ọrụ karịa Chrome.
Isi uru karịa asọmpi nke Chrome na-enye anyị na nsụgharị ya maka kọmputa bụ arụ ọrụ zuru oke mgbe anyị nwetara Gmail, Google Drive, Google MapsIhe na-anaghị eme na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na a na-enye ọrụ ndị a site na ngwa ndị ọzọ.
Ọganiihu nke Chrome, ọkachasị na gam akporo, sitere n'eziokwu ahụ abịa tupu arụnyere na niile smartphones na-eru ahịa na ohere na-Play Store na nke bụkwa ndabara nchọgharị na android.
N'ụzọ dị mma, n'ime nhọrọ nhazi gam akporo, anyị nwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ nchọgharị ndabara ka oge ọ bụla anyị pịa njikọ ọ bụla ihe nchọgharị anyị kachasị amasị anyị ga-emeghe kama Chome.
N'ụzọ dị otú a, na mgbakwunye, anyị ga-egbochi ngwaọrụ anyị ịjụ anyị ugboro ugboro na ihe nchọgharị anyị chọrọ imeghe njikọ nke anyị pịrị, karịsịa mgbe anyị nwere ihe karịrị otu nchọgharị arụnyere.
1 Esi gbanwee ndabara nchọgharị na gam akporo
2 Ọzọ nhọrọ iji nweta ya, na "Mepee ya"
Ndị a bụ Nzọụkwụ ịgbanwe nchọgharị ndabara na gam akporo:
Ke akpa itie, na dị ka ọ bụ omenala na-eme ụdị ọ bụla nke mgbanwe na nhazi nke ngwaọrụ anyị, anyị na-aga na Ntọala nke usoro.
Na-esote, pịa na Aplicaciones na mgbe ahụ na gia wheel emi odude ke elu aka nri akuku nke ihuenyo.
N'oge ahụ, a ga-egosipụta loa ndabara ngwa mgbe ị na-eme nchọgharị, na-eji kọntaktị, ngwa kalenda ...
Iji nyegharịa ihe nchọgharị ndabara, pịa Nchọgharị ngwa site na ndọpụta egosiri, anyị na-ahọrọ nke anyị chọrọ ka ọ bụrụ nke na-emepe emepe njikọ niile nke anyị pịrị.
Ọzọ nhọrọ iji nweta ya, na "Mepee ya"
Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu ndabere gam akporo ngwa, ọ na-ajụkarị gị ihe ị chọrọ ịrụ yana nke ngwa. Na nke a, ọ bụrụ na ị wụnye ihe nchọgharị abụọ, ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ha. Ihe kwesịrị ekwesị bụ ịnwekarị otu karịa nke ọzọ, ma na nke a ọ dị mma ịnweta pro ọzọ ma ọ bụrụ na nke ọzọ ada.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ "Mepee ya" ịpụta, ị ga-ehichapụ nhọrọ "Always". jiri ngwa a, maka nke a ịchọrọ iwepu ụkpụrụ ndabara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka m jụọ gị ọzọ. Ọtụtụ ajụọla onwe ha ajụjụ a na azịza ya bụ ka ha họrọ mgbe niile a ga-eji ngwa ahụ meghee.
Iji mee nke a, anyị na-aga Ntọala> Ngwa> Ihe nchọgharị ị nwere ndabara na nhọrọ nke Mepee site na ndabara tinye ka ihichapụ Hichapụ ụkpụrụ ndabara site na ịpị igbe a. Ugbu a oge ọ bụla ịchọrọ imeghe URL site na ngwa ọ ga-ajụ gị ụdị ihe nchọgharị ị ga-eji n'oge ahụ ọ gaghị emepe ma ọ gwụla ma ị nyere ya ka ịcheta "Always".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Esi gbanwee ndabara nchọgharị na gam akporo